Ampidino Secret Neighbor ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (2764.80 MB)
Ampidino Secret Neighbor,
Secret Neighbor dia kinova marobe anny Hello Neighbor, iray aminireo lalao mampihorohoro mangingina indrindra ao aminny PC sy finday.
Sintomy ny mpiara-monina miafina
Secret Neighbor dia lalao mahatsiravina ara-tsosialy marobe izay andianà mpanakorontana manandrana manavotra ny sakaizany aminny lakaly manaitra ny mpiara-monina aminy. Ny olanao fotsiny dia ny iray aminireo mpiditra an-tsokosoko dia ny mpifanila vodirindrina aminy.
Secret Neighbor dia lalao fampihorohoroana ara-tsosialy marobe an-tserasera napetraka aminny toerana mitovy aminny Hello Neighbor. Jereo ny trano Hello Neighbor miaraka aminny namanao, fa mitandrema kosa; ny iray aminizy ireo dia ilay mpifanila vodirindrina miafina. Miaraha mandroso sy mamonjy ny sakaizanao aminny lakaly ambany na manaisotra ny olona rehetra ho mpifanila vodirindrina aminao!
Mpilalao 6 olon-dratsy 1: tanjona tokana ny tanjonny antokonao; Mitsangatsangana manodidina ny trano manangona lakile hamaha ny varavarana ao ambany. Ny olana tokana; Mpifanila vodirindrina aminao ny iray aminareo, mpamadika tanindrazana!
Milalaova toy ny zaza: Miaraha miasa aminireo mpiara-miasa aminao, miara-miasa na misaraka aminny taktika, ampiasao ny fahaizanao ary sokafy tsirairay ny varavarana aminny lakaly.
Milalaova toy ny mpifanila vodirindrina aminao: Atsaharo ny olona miditra an-tsehatra! Mandehana manafina mba hahazoana ny fitokisany, mametraha fandrika ary alaivo tsirairay tsirairay ireo mpanelingelina. Resy lahatra ny namanao fa olon-kafa ny mpifanila vodirindrina aminao ary atombohy ny fihazana. Mila miafina ny tsiambaratelonao!
Manorena ny tranonao manokana: manana traikefa ampy hivezivezena ny sari-tany ve ianao ary mikimpy ny masonao? Mifamadiha aminny Editor Editor ary manaova maze anao manokana, avy eo asao ny namanao hilalao!
Fepetra takiana aminny rafitra mpiara-monina miafina
Ny fitaovana ilaina aminny filalaovana ny lalao Secret Neighbor aminny Windows PC dia voafaritra araka ny fepetra takianny rafitra miafina akaiky indrindra sy ny rafitra takiana:
Fepetra takiana farany ambany
Rafitra miasa: Windows 7 ary mihoatra ny processeur 64-bit
Mpandrindra: Intel Core i5-3330 3.0 GHz, AMD FX-8300 3.3 GHz
Fahatsiarovana: RAM 6GB
Karatra horonantsary: ​​NVIDIA GeForce GTX 760, Radeon R9 270
Tambajotra: Connection Internet broadband
Fitehirizana: toerana malalaka 5 GB
Rafitra miasa: mpikirakira Windows 10 64-bit
Mpandrindra: Intel Core i5-4690 3.5 GHz, AMD Ryzen-3 1300X 3.5 GHz
Fahatsiarovana: RAM 8GB
Karatra horonantsary: ​​NVIDIA GeForce GTX 1060, Radeon RX 580
Haben'ny rakitra: 2764.80 MB